AMAKAAG: Waxa Laga Yeeli Doona Ciyaartoyga Mid Kale Si Ulakac Ah Ugu QUFACA Oo La Ogaaday & Jamaahiirta Oo Aan Rumaysan Karin - Gool24.Net
AMAKAAG: Waxa Laga Yeeli Doona Ciyaartoyga Mid Kale Si Ulakac Ah Ugu QUFACA Oo La Ogaaday & Jamaahiirta Oo Aan Rumaysan Karin
Kubadda cagta ayaa soo laabatay kaddib saamayntii uu ku yeeshay xanuunka Korona isla markaana mudo bilooyin ah dunida xaalad cakiran ay gasha balse maaha kubaddii cagta ee aynu naqaanay isla markaana aynu jeclayn.
Wax jamaahiir ahi ma joogaan garoomada halka xiddigaha keydka fadhiya lagu kala foggeeyay kaabadaha sarre ee garoonka mana jiraan wax is gacan-qaadyo ahi kahor ciyaarta.
Waxa ay qaadan kartaa wakhti aad u dheer ilaa ay kubadda cagtu kusoo laabanayso sidii caadiga ahayd, waxa jira sharciyo la xidhiidha xanuunka Korona oo la fuliyay si loo yareeyo fiditaanka xanuunka.
Sida uu hadda sheegayo wargeyska The Times, ciyaaryahanka si ulakac ah ugu qufaca mid kale oo kasoo horjeeda amaba garsooraha kulanka ayaa kaadh casaan ah oo toos ah garoonka lagaga saari doonaa waana sharci layaabkiisa leh.
Sharcigan ah in garoonka laga saaro xiddiga mid kale amaba garsoore ku hor qufaca ayaa la filayaa in si deg-deg ah loogu hir gelin doono dhammaan qabyaha kala duwan ee kulamada.
Warbixinta ayaa intaas ku daraysa in xiddiga mid kale ku qufaca aan kaliya loola dhaqmi doonin sida midka mid kale feedha balse intaas loogu dari doono in xataa boolis gacanta loo geliyo oo lala xisaabtamo.
Sharciga garsoorayaasha ee FA-ga ayaa sheegaya in haddii uu garsooruhu hubo in ciyaaryahan oo midkale ku hor qufacay amaba meel dhaw kaga qufacay inay tahay in garsooruhu qaado talaabo isaga oo adeegsanaya sharciga 12-aad ee la xidhiidha weerarka, cayda iyo af-xumada kala duwan.
Ugu dambayn, adigu akhriste ma sawiran kartaa iyadoo qalabka garsoore caawiyaha ah ee VAR loo adeegsanayo si loo hubiyo haddiiba uu ciyaaryahan mid kale ku qufacay?
De waa si ciyaartiiba 10casaan loo bixiyo ileen Khaladkiiba Qufacbaa raacee😅😅